I-FOO FIGHTERS, IPOST MALONE, KUNYE NOTYLER, UMDALI OBEKA INTLOKO KWILOLLAPALOOZA 2021 - UKUZONWABISA
I-Foo Fighters, iPost Malone, kunye noTyler, uMdali obeka intloko kwiLollapalooza 2021
Umculo obukhoma ubuyile! Njengoko ilizwe libuyela kancinci kwimo yesiqhelo, iindawo ziqala ukuvuleka kwaye umculo ubuyela kumanqanaba kwilizwe liphela. Imithendeleko nayo ibuya, nge ILollapalooza Ukubhengeza uluhlu lwayo kumnyhadala wayo we-Agasti ka-Agasti.
Emva kokunyanzelwa ukuba usirhoxise isiganeko sonyaka ophelileyo ngenxa yobhubhane, ushicilelo lowe-2021 lolona lomeleleyo kula maxesha akutshanje. Ngaphezulu kwe-170 yezenzo eziza kwenza kumanqanaba asibhozo ngaphezulu komsitho weentsuku ezine, kunye neRock kunye neRoll Hall of Fame inductors iFoo Fighters, i-rap superstar Post Malone, imvumi ye-pop uMiley Cyrus, kunye nenkokheli ye-Odd yexesha elizayo uTyler, uMdali ophambili.
Isuti engwevu nezihlangu ezimnyama
Ezinye izinto ezenziwayo eziza kwenziwa zibandakanya uMegan Thee Stallion, Dababy, Brittany Howard, Limp Bizkit, Rico Nasty, Modest Mouse, Brockhampton, kunye noJimmy Eat World
Uluhlu lwakho lwama-2021. Amatikiti ayathengiswa namhlanje nge-12pm CT. #Lolla https://t.co/PreRFI1XZX pic.twitter.com/lvW5LWSMC7
-Lollapalooza (@lollapalooza) Ngomhla we-19 kuMeyi 2021
Apha eChicago, igama elithi 'Lollapalooza' belisoloko lifana nehlobo, umculo omnandi, kunye neentsuku ezine zolonwabo olungalibalekiyo - ezenze isigqibo sonyaka ophelileyo sokuhlehlisa konke kunzima, utshilo uSodolophu uLori E. Lightfoot ingxelo . Ngoku, kungaphelanga nonyaka emva koko kwaye sixhobile ngesitofu esikhuselekileyo, esisebenzayo, nesifumanekayo ngokubanzi, siyakwazi ukubuyisa enye yeminyhadala yomculo wasehlotyeni. Ndifuna ukubulela iqela le-Lollapalooza ngokusebenza ngokusondeleyo neSixeko ukudala isicwangciso-qhinga sokuvula kwakhona esibeka phambili ukhuseleko kwaye esingenakulinda ukubona abantu abaza kumthendeleko babuyela eGrant Park kweli hlobo.
Abo banomdla wokuhamba phambili kuya kufuneka babonelele ubungqina bokugonywa yi-COVID ukuze bangene. Ukuba awunamdla wokufumana i-jab, kuya kufuneka unikeze iziphumo zovavanyo olubi ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zokuzimasa usuku ngalunye lomnyhadala. Iinkcukacha ezithe kratya ziya kufumaneka zikhokelela kumthendeleko.
Amatikiti eentsuku ezine ngoku athengisiwe ngoku ukusuka Indawo kaLollapalooza . Ukwamkelwa ngokubanzi kokuya kudlula i-375 yeedola zeedola kwaye i-GA + amatikiti axabisa ama-700 eedola, ngelixa iitikiti zeVIP zisiya kwi- $ 1,500 yeedola kunye nePlatinam ngeedola ezingama-4200 zeedola.
Bona ngakumbi malunga - Iincwadi ezili-10 eziMnandi zoMculo ngalo lonke ixesha
Izimvo zamagumbi e-tv ngeendawo ezincinci
izimvo zomqolomba womntu kuhlahlo-lwabiwo mali
ifestile yangaphandle isika imibono yemifanekiso
iiTattoo zesandla emkhosini
iinwele eziphakathi ziphelile iinwele ezichanekileyo
esifubeni kunye nesiqingatha emkhonweni tattoo
paw print tattoo esihlahleni
I-navy pin up iitattoos zamantombazana